नेप्सेमा कारोवार हुने राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकमध्ये कसको कमाइ राम्रो, कुन अण्डरभ्यालुड ? – Insurance Khabar
नेप्सेमा कारोवार हुने राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकमध्ये कसको कमाइ राम्रो, कुन अण्डरभ्यालुड ?
प्रकाशित मिति : ८ फाल्गुन २०७६, बिहीबार १३:०१
काठमान्डौ । संचालनमा रहेका ११ वटा राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरुमध्ये हाल नेप्सेमा ८ वटा राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरुको मात्र शेयर कारोबार हुने गरेको छ । बाँकी तीन वटा विकास बैंक अन्य संस्थासँग गाभिने प्रक्रियामा रहेकाले ८ वटा राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकको मात्र नेप्सेमा शेयर कारोबार हुने गरेको हो ।
अन्य संस्थासँग गाभिन लागेका राष्ट्रिय स्तरका विकास बैकहरुमा गण्डकी विकास बैंक मेगा बैंकसँग, कैलाश विकास बैंक प्राइम कमर्सियल बैंकसँग र देवः विकास बैक कुमारी बैंकसँग गाभिने प्रक्रियामा रहेकाले शेयर कारोबार रोक्का भएको छ । त्यसकारण इन्स्योरेन्स खबरले राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरुले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा प्रकाशन गरेका वित्तीय विवरणको आधारमा कुन विकास बैंक ओभरभ्यालुड र कुन अण्डरभ्यालुड भनेर विश्लेशन गरिएको छ । विकास बैंकहरु नेप्सेमा कारोवार हुने क्षेत्रमध्ये अण्डरभ्यालुड मानिन्छन।
खुद नाफाको आधारमा:
चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा बैंकहरुले प्रकाशन गरेको वित्तीय विवरणको आधारमा सबैभन्दा धेरै मुक्तिनाथ विकास बैंकले खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । मुक्तिनाथ विकास बैंकले ४७ करोड २५ लाख खुद मुनाफा गरेको छ। त्यस्तै दोश्रोमा गरिमा विकास बैंकले ३२ करोड ५५ लाख खुद मुनाफा गरेको छ।
प्रति शेयर आम्दानीको आधारमा शाईन रेसुङ्गाको प्रति शेयर आम्दानी धेरै छ। शाईन रेसुङ्गाको प्रति शेयर आम्दानी २२ रुपैया ९२ पैसा छ भने मुक्तिनाथ विकास बैंकको प्रति शेयर आम्दानी २१ रुपैया ८४ पैसा छ।
मूल्य आम्दानी अनुपातको आधारमा :
फाल्गुन ७ गतेको बजार मूल्यको आधारमा लुम्बिनी विकास बैंक अण्डरभ्यालुड देखिन्छ। लुम्बिनी विकास बैंकले मूल्य आम्दानी अनुपात १० दशमलव ५६ गुणा रहेको छ भने महालक्ष्मी विकास बैंकको मूल्य आम्दानी अनुपात ११ दशमलव २३ गुणा रहेको छ।
नोट : फाल्गुन ७ गतेको बजार मूल्यको आधारमा